Nhau - Ndezvipi zvikonzero zvinokanganisa kuita kweAmazon FBA yekuita
Ndezvipi zvikonzero zvinokanganisa kuita kweAmazon FBA yekuverenga mashandiro
Yechitoro cheAmazon online, huwandu hwemazuva ehuwandu hunoreva huwandu hwemazuva ayo anofungidzirwa kuwanda kwezvinhu zvese zvinogona kuchengetedzwa neAmazon logistics. Turnaround ndiyo nhamba yenguva dzako maAmazon logistics inventory anotendeuka pamusoro pagore, zvichipiwa yazvino huwandu hwehuwandu uye mitengo yekutengesa. Saka ndezvipi zvikonzero izvo zvinokanganisa mashandiro anoita?
Kune akatiwandei akakosha ezvinhu zvinokanganisa iyo yekuverengera kuita tarisiro:
1. Mazuva Ekuverenga
2.SKU kuStock kumusoro
4.A SKU isina huwandu hwemashoko ari kutengeswa
Panguva ino, kune akati wandei marudzi emazano ekubatsira kusimudzira IPI (Inventory Performance Goal):
1 - Kuderedza kuwanda kwehuwandu kunobatsira purofiti yakakwira
Kuwedzera mwero wekutengesa kuenzanisa huwandu hwevhiki huripo hwekutengesa
3.Gadzirisa iyo yeAmazon hesera pasina ruzivo rwekutengesa kuti uve nechokwadi chekuti uwandu hunowanikwa pakutenga.
4.Kuchengeta zvinhu zvakakurumbira muzvitoro kunobatsira kuwedzera kutengesa
Amazon stock mazuva
Izvo zvakafanira kuchengetedza iyo FBA yekuverenga mazuva akapoteredza 30-60 mazuva. Imwe ndeyekudzivirira kushomeka kwemasheya uye imwe yacho kudzora kuwanda kwekuwedzera.
Kunyora kuri mumatanho akasiyana uye kunofanirwa kuve nekufunga kwakasiyana.
Nguva yekuvandudza: kana chinongedzo chiri munguva yekusimudzira, kutengesa kwezuva nezuva kunowedzera nekukurumidza, uye mazuva ekuverenga achavewo neanokurumidza uye akasimba ekuderedza maitiro. Kana iyo hesera ikachengetedzwa pahwaro hweiyo yekutanga vhoriyamu yekutengesa, kupihwa kunogona kuve mazuva makumi matanhatu, uye chinongedzo hachizovapo muchitoro nekukurumidza nekuda kwekukura kwehuwandu hwekutengesa, izvo zvinopa nguva yekuzotevera hesera kugadzirira.
Yakadzikama nguva: Kutengesa kwezuva nezuva kwakagadzikana, chengetedza nhamba yemazuva makumi matatu yekuverenga kuti uve nechokwadi chekugona kubata nezvinokurumidza. Semuenzaniso, vatengi vemakambani vanoita kutenga kukuru, zvinongedzo zvakagovaniswa nevakakurumbira vewebhu, zvichingodaro. Izvi zviitiko zvinongoerekana zvaitika hazviwanzo fungidzirwa uye hazviwanzo kuitika. Mazhinji ezviitiko zvenguva pfupi iyi spike mukutengesa rimwe zuva uyezve kugadzikana gare gare. Mazuva makumi matatu kana zvakadaro ekuverenga, pamusoro pekugadzirisa nenjodzi idzi kuona kuti pave nenguva yekutevera yekutsvaga kwekukurumidza.
Chikamu chekudzoka: Kana rondedzero yacho ikadzikira zvishoma nezvishoma nekuda kwekuchinja kwemwaka, kuongororwa kwakaipa, kurasikirwa kwemakwikwi mukana uye zvimwe zvikonzero, huwandu hwezuva nezuva hwekutengesa hunodzikira uye huwandu hwemazuva ekuverenga eFBA anowedzera musimba.
Panguva ino, zvakafanira kuti uongorore zvikonzero nekukasira, kugadzirisa masheya esitoko, kudzora huwandu hwemazuva emastock nekuderedza stock stocking kana zvine mwero kukwidziridzwa, uye kudzora njodzi yekuwandisa stock.